Madaxweyne Waare oo walwal ka muujiyay dagaallada ciidamada dowladda iyo Al-shabaab.
Madaxweynaha maamul gobolleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa walwal ka muujiyay dagaallada ka bilaawday qeybo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe oo uu ka arimiyo maamulka uu madaxweynaha ka yahay.
Madaxweyne Waare ayaa muujiyay in maamulkiisa wax watashi ah lagala sameyn dagaallada ka socda deegaanno hoostaga degmada Balcad gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Basra oo dagaallo culus ciidamada dowladda kula galleen Al-shabaab.
‘’Inkastoo ciidamadu ay ku shaqeynayaan Amarkii madaxweyne Farmaajo oo dagaalka Iclaamiyay, haddana dagaalku wuxuu u baahan yahay wadatashi iyo in hal fikir laga wada qaato, sidda ay hadda dagaalladu ku socdaan gaar ahaan deegaanka Basra runtii Annaga ka maamul ahaan waxaan ka qabnaa walwal aad u weyn, waxaanan jeclaan laheyn in tallada dib loogu noqdo, ayuu yiri’’ madaxweynaha maamulka Hirshabeelle.
Waare ayaa intaa ku darray in haddii aan arrintaa leysaga iman oo wadatashi laga yeellan ay ka dhalan karaan dagaallada hadda socda dhibaatooyin faro badan.
Diyaarado dagaal ayaa dhawaan lagu waramayaa in ay duqeyn ka geysteen qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe, waxaana la sheegay in duqeyntaa lagu bartilmaameedsaday Al-shabaab.
Inkastoo qabiirada ciidamada ay isku raacsan yahiin in hadii xaalad dagaal lagu jiro aanay Suuragal ahayn in Cid walba ogaato ama lagala tashado xogaha dagaalka taasoo dhici karta in Sir dagaal baxdo,waxaana intaas sii dheer in dagaalka soomaaliya ka socda aanu ahayn Cadow dibada dalka uga soo duuley oo ay yahiin Isla Soomaali dadkuna isku wada Xiran yahiin, Iskusoo wada duuboo inastoo madaxda sare iyo maamuladu ay wanaagsan tahay in xiliyada qaarkood wada tashi yeeshaan hadana waa iska Caadi in xogta dagaal ee ciidamada aanay Cid walba ogaan..